HomeANKAPOBENYAndroany amin'ny tantara: 5 Oktobra 1908 nanambara ny fahaleovan-tenany i ...
05 / 10 / 2019 Levent Elmastaş ANKAPOBENY, TORKIA, Androany teo amin'ny tantara 0
5 Ôktôbra The 1869 Porte dia manana fifanarahana manokana amin'i Hirsch, manome antoka ny frantsa 10 tapitrisa izay nanoloana ny 65 handoavana ny fe-potoana isan-taona.
Nanambara ny fahaleovan-tenany ny 5 October 1908 Bulgaria. Aprily 19 Noho ny protocole tamin'ny daty 1909, dia nanaiky ny handoavam-bola frantsa 42 ho an'ny Fanjakana Ottoman ho an'ny ampahany sisa amin'ny Lalan'i Rumeli ary koa ny làlan'i Belova-Vakarel. Ny vola 21 tapitrisa 500 an'arivony amin'ity karama ity dia nomena ny orinasan-dalamby tatsinanana.
Androany amin'ny tantara: 5 Oktobra 1908 Bolgaria dia manambara ny fahaleovan-tenany. 19 Avrily 1909 namoaka ny protocole niaraka tamin'ny ... 05 / 10 / 2012 5 Oktobra Ny Porte de 1869 Porte dia manana fifanarahana manokana amin'i Hirsch, manome antoka ny frantsa 10 tapitrisa izay nanoloana ny 65 handoavana ny fe-potoana isan-taona. Nanambara ny fahaleovan-tenany ny 5 October 1908 Bulgaria. Aprily 19 Noho ny protocole tamin'ny daty 1909, dia nanaiky ny handoavam-bola frantsa 42 ho an'ny Fanjakana Ottoman ho an'ny ampahany sisa amin'ny Lalan'i Rumeli ary koa ny làlan'i Belova-Vakarel. 21 tapitrisa tapitrisa 500 an'arivony tamin'io figadrana io dia nomena ny orinasa Oriental Railways Company.
Androany amin'ny tantara: 5 Oktobra 1908 Bolgaria dia manambara ny fahaleovan-tenany. 19 Miaraka amin'ny protocole tamin'ny Aprily 1909, Railoli Railways ... 05 / 10 / 2015 Androany ao amin'ny Tantara 5 Oktobra Ny Porte de 1869 Porte dia manana fifanarahana manokana amin'i Hirsch, manome antoka ny frantsa 10 tapitrisa fa ny 65 dia nanolo-tena handoavana ny vanim-potoana isan-taona. Nanambara ny fahaleovan-tenany ny 5 October 1908 Bulgaria. Aprily 19 Noho ny protocole tamin'ny daty 1909, dia nanaiky ny handoavam-bola frantsa 42 ho an'ny Fanjakana Ottoman ho an'ny ampahany sisa amin'ny Lalan'i Rumeli ary koa ny làlan'i Belova-Vakarel. Ny vola 21 tapitrisa 500 an'arivony amin'ity karama ity dia nomena ny orinasan-dalamby tatsinanana.
Androany amin'ny tantara: 5 Oktobra 1908 nanambara ny fahaleovan-tenany i ... 05 / 10 / 2016 Androany ao amin'ny Tantara 5 Oktobra Ny Porte de 1869 Porte dia manana fifanarahana manokana amin'i Hirsch, manome antoka ny frantsa 10 tapitrisa fa ny 65 dia nanolo-tena handoavana ny vanim-potoana isan-taona. Nanambara ny fahaleovan-tenany ny 5 October 1908 Bulgaria. Aprily 19 Noho ny protocole tamin'ny daty 1909, dia nanaiky ny handoavam-bola frantsa 42 ho an'ny Fanjakana Ottoman ho an'ny ampahany sisa amin'ny Lalan'i Rumeli ary koa ny làlan'i Belova-Vakarel. Ny vola 21 tapitrisa 500 an'arivony amin'ity karama ity dia nomena ny orinasan-dalamby tatsinanana.
Androany amin'ny tantara: 5 Oktobra 1908 nanambara ny fahaleovan-tenany i ... 05 / 10 / 2017 Androany ao amin'ny Tantara 5 Oktobra Ny Porte de 1869 Porte dia manana fifanarahana manokana amin'i Hirsch, manome antoka ny frantsa 10 tapitrisa fa ny 65 dia nanolo-tena handoavana ny vanim-potoana isan-taona. Nanambara ny fahaleovan-tenany ny 5 October 1908 Bulgaria. Aprily 19 Noho ny protocole tamin'ny daty 1909, dia nanaiky ny handoavam-bola frantsa 42 ho an'ny Fanjakana Ottoman ho an'ny ampahany sisa amin'ny Lalan'i Rumeli ary koa ny làlan'i Belova-Vakarel. 21 tapitrisa tapitrisa 500 an'arivony tamin'io figadrana io dia nomena ny orinasa Oriental Railways Company.
Androany amin'ny tantara: 5 Oktobra fahaleovan-tenan'i 1908 Bolgaria 05 / 10 / 2018 Androany ao amin'ny Tantara 5 Oktobra Ny Porte de 1869 Porte dia manana fifanarahana manokana amin'i Hirsch, manome antoka ny frantsa 10 tapitrisa fa ny 65 dia nanolo-tena handoavana ny vanim-potoana isan-taona. Nanambara ny fahaleovan-tenany ny 5 October 1908 Bulgaria. Aprily 19 Noho ny protocole tamin'ny daty 1909, dia nanaiky ny handoavam-bola frantsa 42 ho an'ny Fanjakana Ottoman ho an'ny ampahany sisa amin'ny Lalan'i Rumeli ary koa ny làlan'i Belova-Vakarel. 21 tapitrisa tapitrisa 500 an'arivony tamin'io figadrana io dia nomena ny orinasa Oriental Railways Company.
Androany amin'ny tantara: 5 Oktobra 1908 Bolgaria dia manambara ny fahaleovan-tenany. 19 Avrily 1909 namoaka ny protocole niaraka tamin'ny ...
Androany amin'ny tantara: 5 Oktobra 1908 Bolgaria dia manambara ny fahaleovan-tenany. 19 Miaraka amin'ny protocole tamin'ny Aprily 1909, Railoli Railways ...
Androany amin'ny tantara: 5 Oktobra fahaleovan-tenan'i 1908 Bolgaria
Famokarana an-trano an-tserasera
Railway dia midika hery sy fahaleovan-tena
Fanamarihana momba ny fanangonan-tsonia: Ny tetikasam-be amin'ny fiarandalamby serivisy tsy azo antoka dia ho raisina
Fiaraha-miasa tsy miankina (GöKu) ho an'ny rafitra fitaterana
Kandidà tsy miankina Afyonkarahisara Cable Car